ktmkhabar.com - नेकपा एसको मन्त्री हेरफेरमा अवरोध खडा गर्ने यी २ मन्त्री पो रहेछन्, खुल्यो गम्भीर रहस्य !
नेकपा एसको मन्त्री हेरफेरमा अवरोध खडा गर्ने यी २ मन्त्री पो रहेछन्, खुल्यो गम्भीर रहस्य !
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को मन्त्री मण्डल हेरफेरको बिषयलाई लिएर बिभिन्न आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको बेला बहालवाला मन्त्री प्रेम आले र रामकुमारी झाँक्रीले पद छोड्न अस्विकार गरेकाले नेकपा एसको पार्टीभित्र संकट पैदा भएको कुरा सतहमा आउन थालेको छ । अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न बाटो खुला गरिदिन गरेको निर्देशनलाइ यी २ मन्त्री आले र झाक्रीलेझाँक्रीले अस्वीकार गरेका हुन् ।
हालको सरकारमा ५ मन्त्री छन् । जसमा पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र शहरी विकाशमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अध्यक्ष नेपालको निर्देशन अस्वीकार गरेका खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार शुक्रबार अध्यक्ष नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न दबाब दिएर निवास फर्किए । त्यसपछि उनले पार्टीका तर्फबाट बनेका मन्त्रीहरुलाई सहज तरिकाले फिर्ता हुन गरेको निर्देशनप्रति दिएका थिए । त्यसका खासगरी मन्त्री आले र झाँक्रीले असहमति जनाएको बुझिएको छ ।
त्यस्तैगरी पर्यटनमन्त्री आलेले भने स्थायी कमिटीको निर्णय सच्चाएर धनबहादुर बुढालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने साथै एकजना महिला पनि मन्त्रीमा सिफारिस गरिनेपर्ने अडान राखेका छन् ।
मन्त्रीका लगि प्रस्ताव राखेका बुडा मन्त्री आले निकटकै सांसद हुन् ।